Wednesday August 21, 2019 - 17:04:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa dhabarka loo saariyay ciidamada dowladda Burkina Faso kadib weerar aad u xooggan oo xoogag jihaadi ah ay ku qaadeen saldhig Melleteri.
Weerarkii Kotogou ayaa sababay dhimashada 24 askari
Wararka ka imaanaya Waqooyiga wadankaas ayaa sheegaya in xoogag islaami ah ay qaadeen weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee Abid ay la kulmaan ciidamada Melleetriga xukuumadda Burkina Faso tan iyo sanaddii 2015.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka dowladda ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 24 askari ay dhinteen tobanaan kalane ay dhaawacmeen kadib markii xoogag jihaadi ah ay weerar gaadma ah ku qaadeen saldhig kuyaal degmada Kotogou.
Ilo wareed melleteri ayaa Shabakadda Sahara Media u sheegay in xoogag hubeysan ay weerar ku kediyeen ciidamada dowladda waxayna xoogagaas ku guulaysteen in ay qabsadaan saldhigga oo kuyaal gobolka Somm.
Weerarkan dhiigga badan ku daatay wuxuu yimid Afar maalmood kadib markii uu dhacay weerar 15 qof lagu dilay sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliska Burkina Faso.
Kooxaha Mucaaradka ah oo kulan deg deg ah ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Ouagadougou ayaa ugu baaqay xukuumadda talada haysa in ay iscasisho waxayna ku eedeeyeen fashil dhan walba ah, Telefeshinka ku hadla Afka dowladda Burkina Faso ayaa baahiyay muuqaallo muujinayay Meydadka ciidamada oo naxash lagu sido.
Weeraradan ay geysanayaan xoogaga Jihaadiga ah ee Al Qaacidda katirsan ayaa kasoo bilaawday waqooyiga wadanka waxayna kusii fidayaan dhanka bariga, meesha ugu daran ee weeraradu ka dhacaan waa xuduud beeenaadka uu dalka Maali la wadaago Burkina Faaso.
Weerarkan wuxuu imaanayaa xilli madaxweynaha dabadhilifka ah ee Burkina Faso uu hayo xilka madaxtinimada wareegtada ah ee isbaheysiga Saaxilka (G5) oo ah isbahaysi Faransiisku dhisay kaalin weyna ku leh duullaanka gardarra ah ee lagu qaaday muslimiinta wadanka Maali.